10 Inta badan Waddooyinka Beautiful In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Inta badan Waddooyinka Beautiful In Europe
Europe waxaa ka buuxa qaar ka mid ah Waddooyinka Most Beautiful. From ugu qatarsanaa oo midabo si aan caadi ahayn u. Qaar ka mid ah Waddooyinka Beautiful In Europe intooda badan waxaa horey u helay oo si fiican u habaysan on track dalxiiska ee laakiin qaar kale waxay dhabta ah waa GEMS qarsoon in kaliya kuwa ogaada ay awood u raadin baxay noqon doonaa. Waxaan ka wada saaray liiska ugu sareeya our!
1. Inta badan Beautiful Street In Europe: wadada Cremieux, Paris, France
Waxaa jira wax ku saabsan guryaha Alifana oo quaint, jidadka cobbled oo ka mid ah wadada Cremieux samaynaysaa in hoos gelinaya aad camera aan macquul aheyn! Tani wadada PSG qurux damacsan yahay la pinks, cagaarka, kaarka hurdiga ah iyo blues, midabka wax u dhigma ka dhisan kasta in photo biqil qasabka ah. Samee garaam ah, guys!
Via Toledo waa waddada hore iyo mid ka mid ah ah thoroughfare shopping lagama maarmaan ah in magaalada Naples, Italy. Tani 1.2 kiiloomitir ee jidka waa mid ka mid ah Waddooyinka Beautiful In Europe intooda badan. Waxaa ay ku bilaabataa at Piazza Dante iyo dhamaado Piazza Trieste e Trento, dhow Piazza del Plebiscito.
Dhismaha waddada la amray by hadha ee Naples, Pedro Alvarez de Toledo, in 1536. Via Toledo noqday caan ah sida natiijo ah oo u socdaalay Grand Tour ee qarniyadii 18aad iyo 19aad iyo mahad songs Neapolitan, kuwaas oo waxaa si joogta ah u soo sheegnay.
3. Inta badan Beautiful Street In Europe: Kynance Mews, London, England
Ivy daboolay guryaha iyo jaranjarada qarsoodi ah. Kynance Mews ee Kensington waa by ilaa hadda ka Waddooyinka ugu quruxda badan ee Europe. In xilliga dayrta, wadada glows la caleemo cagaaran iyo Burgundy, iyo marka guga gaaray, guryaha soo jeedin dhulka howdka ah guduud. Tani waxay meesha of London waa wax fikrad qora samada!
The Calleja de las Flores waa mid ka mid ah ugu jidadka dalxiiska caanka ah ee magaalada Cordoba ee Andalusia, Spain. Waxaa sidoo kale waa sababta ay liiska ugu Beautiful Waddooyinka In Europe our. Taagan yahay sida isgoyska jidka Velazquez Bosco, waa wadada cidhiidhi ah in uu dhammaanayo Plaza a.
Derbiyada cad yihiin iyo jiidh leh xad-dhaaf ah, dheryihii ubax lagu duubay la Geranium iyo carnations buuxiyey, siinta pop a ammaanta leh oo midab si this qayb run ahaantii gaarka ah ee magaalada. Oo ay la socdaan ay cidhiidhi ah, dabaqa cobbled, archways dhagax iyo dabcan Qurxinta derbiga u qurux badan, Cathedral Mezquita waa in view ka dhexeeya derbiyada u samaynta Intaa waxaa dheer ku fiican in sawir hore u kaamil ah.
5. Inta badan Beautiful Street In Europe: Chalcot Square, London, England
Faydatay marti yar oo laba jibbaaran oo u dhow primrose Hill, waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah Most Beautiful Waddooyinka In Europe sida ceelka ugu Instagrammable! Sawirtaa saf ah gury pastel quruxsan taagnaan sare, hoosta ku wareegsan yar, park oo qoyan oo aan waa Chalcot Square. Waxaa la dhagax tuur ka Regents Park iyo suuqa caanka ah Camden.
Haddii aad soo jeedi filimka, In Bruges la Colin Farrell. Oo markaasaad ogaan doontaa waxa aan ka hadlayno. Tani waa mid ka mid ah baraha ugu idyllic daqiiqad kaadh in! Rozenhoedkaai laga yaabaa in jidadka yar sida badan meelaha kale ee liiska this, si kastaba ha ahaatee, waxaan ka fikiray, waxa weli u qalantay Xusuuso gaar ah. Wax kasta oo xilliga sanadka, Rozenhoedkaai glows martida ay. Waxaa jira wax si faraxgelinta ku saabsan naqshadaha ekayd iyo hilaaca geed in ku dhawaad ​​gesha biyo kanaalka galay.
7. Inta badan Beautiful Street In Europe: Victoria Street, Edinburgh, Scotland
Ku raaxayso cabbayso hoos Edinburgh cobbled Victoria Street xiiso leh buuxiyeen, dukaamo gaar ah, iyo makhaayadood. Victoria Street waa gabal adag ee taariikhda citys leh oo ay derbiyo dhagax iyo martida da'da jiidashada jir soo jiitay in ka badan oo dhan. Hubi in aad hoos u sii socda inay Grassmarket kaas oo asalkiisu ka soo jeedo ee qarnigii 14aad iyo iibiya oo dhan cayn kasta oo wax soo saarka maxaliga ah iyo gelinno inay qaado.
Nyhavn shilinta sanduuqa isagoo sawir kaamil ah dekedda wadada dhinac ah in Cadha daraadeed la kala midabka, iyadoo ay daqal doon idyllic, kafateeriyada macaan iyo maqaayado baalaha lasoo labada dhinac. Magaalada faanaa Tani Copenhagens jawi sool iyo vibe hipster iyo sidoo kale wadada ugu picturesque ee magaalada. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
9. Inta badan Beautiful Street In Europe: Burano, Venice, Italy
socod A (ama geeyo doon) hoos wadada u qurux badan this in Venice waa sida qaadashada safar qaansoroobaad. Burano waa jasiirad xilli haro badda uguurtay ah, laakiin haddii aad weligaa nasiib ku lahaa inaan soo booqdo aad la dilis doonaa camera (telefoonka gacanta) isla markiiba. guryaha la kanaalka qurux socda si toos ah u dhex iyada ka samaysaa si faraxgelinta. Waa nooc ka mid ah meeshaas oo qaadi kara qof kasta oo niyadda dumaya.
Qaado cabbayso hoos dunida caan East Side Gallery. wadada A la gallery dhabta ah hawada u furan oo dhan malaasay oo ay la socdaan hadhaagii Wall Berlin ah. Waxaa jira fursado Insta hoos galore jidka this sida farshaxanka waa cajiib, laakiin waxa ay sidoo kale waa waanada horjoogsado taariikhda Berlin iyo Dagaalkii Qaboobaa.
aad diyaar u ah inay tagaan oo booqo Waddooyinka ugu quruxda badan ee Europe Ma? Hubi in aad la ballansan Save A tareenka No lacag dheeri ah, buunbuuninayo ma, kaliya madadaalo!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Inta badan Waddooyinka Beautiful In Europe Si Baadh” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europestreets europetravel longtrainjourneys prettystreets trainjourney tareenada talooyin tareenka